Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọdịmma ma ọ bụ mara mma? Kedu ndepụta nke ndị na-ere ahịa ga-adaba ugbu a?
Edela ọtụtụ ihe gbasara ihe ndekọ ezumike chọrọ n'afọ a. Nnyocha ụlọ ọrụ Creo Advisors na-akọwapụta usoro dị mkpa nke ga-ekewa ndị na-ere ahịa nwere obi ụtọ na ndị nwere nkụda mmụọ n'oge ezumike a. Ọ bụ ezie na a kpọchiri ọtụtụ mkpebi, mmezu nke ụbọchị 37 ikpeazụ tupu ezumike ahụ ga-arụ ọrụ ka ukwuu karịa ka ọ dị n'ihi usoro ịzụ ahịa nke ndị ahịa na ihe ịma aka n'usoro ọkọnọ.
Isi ihe ewepụtara site na nyocha ndị ahịa gụnyere:
• Ndị na-eri ihe ebulighị ịzụ ahịa ezumike n'ihu. N'ezie, ndị na-azụ ahịa na-akọ na ọ bụ ihe dịka 7% n'azụ ọkwa nke mmefu ego n'afọ gara aga dị ka mmalite November
• Enwere ike ịnwe ụkọ ngwa ahịa ga-emetụta omume na-eduga ngbanwe nke ihe karịrị ijeri $60 na mmefu n'etiti ndị na-ere ahịa n'oge ezumike a.
• Mgbe ihe karịrị 85% nke ndị na-azụ ahịa na-eme atụmatụ ịga ụlọ ahịa maka ịzụ ahịa ha, ha na-atụ anya na ahụmahụ ahụ ga-atụle 4.5 n'ime 10.
• Ịkwado ọchịchọ na-enweghị atụ, ọtụtụ ihe mgbochi, na atụmanya dị ala ga-achọ ọkwa ọzọ nke ike na igbu. Agbanyeghị, ụgwọ ọrụ a dị oke mkpa maka ndị na-ere ahịa na-aga nke ọma
Achọrọ ezumike na oge
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akara ngosi niile achọrọ n'ahịa na-arụtụ aka na ezumike 'otu oge n'ọgbọ'. Na nyocha nke ụlọ anyị sitere na Nọvemba 4-12, 2021 (N=2,519), ihe dị ka 26% nke ndị zara ajụjụ amalitebeghị ịzụ ahịa ezumike ha dị ka mbido Nọvemba afọ a karịa 22% n'afọ gara aga. N'ozuzu, ndị na-azụ ahịa na-akọ na ha nwere ihe dịka 7% obere ịzụ ahịa ezumike ha agwụla n'afọ a karịa otu ebe n'afọ gara aga. "Nke a abụrụla afọ siri ike, gbagwojuru anya maka ndị na-azụ ahịa. Ịzụ ahịa na-egbu oge, yana ndị na-azụ ahịa nwere ahụ ike, kpalitere ọchịchọ ime ememe ezumike nkịtị, na ihe ndị ọzọ ga-eduga n'ọchịchọ dị elu n'ime izu 5½ na-abịa," Richard Vitaro, Onye isi nchịkwa, Creo Advisors kwuru. Na mgbakwunye, nyocha anyị gosipụtara mmasị dijitalụ na nke ọdịnala, nke enwere ike itinye ya iru ndị ahịa n'oge a nke oge.
Ihe ịma aka mgbanye n'onyinye na ohere iji nweta ohere
Nchegbu na-eto eto gburugburu ụdọ ọkọnọ zuru ụwa ọnụ na-aga n'ihu ka anyị na-amalite inwe mmetụta nke ngwaahịa ezumike na-egbu oge n'ofe ụlọ ọrụ. Dị ka nyocha anyị si kwuo, ụkọ ngwaahịa ga-eme ka ntụgharị 7% dị na ire ere ezumike a, nke ndị na-ere ahịa ndị ahụ nwere ọnọdụ siri ike ma ọ bụ nwere ike iduzi ndị na-azụ ahịa na ụzọ ndị ọzọ a na-anabata. Anyị na-atụ anya na a ga-enwe ihe karịrị $ 60 B na ego ha ga-enweta site n'aka ndị nwere oke ngwa ahịa siri ike, yana ndị na-ere ahịa ndị ọzọ nwere ike na-eche ihe ndị na-emepụta ihe na-ekpo ọkụ na-eche ihu mgbe ezumike gasịrị ka ebuka na-aga n'ihu. Steve Vielmetti, Onye isi nchịkwa na Creo Advisors, na-ekwu, sị, "Ndị na-ere ahịa na ndị na-emepụta ihe na-etinye ihe ize ndụ karị na ụlọ elu dị elu ma ọ bụ nwee ụdọ ndị na-emepụta ihe na-eduzi ndị na-azụ ahịa ka ndị ọzọ na-anabata ma ọ bụ na-emeghachi ngwa ngwa iji weghachite iwu ma ọ bụ ngwaahịa, ga-emeri n'oge a. ” Steve na-agbakwụnye, "E wezụga ezumike ahụ, ụlọ ọrụ ga-agarịrị na 'smart ọkọnọ yinye' nke ndị mmekọ na akụ nwere ọnọdụ nke ọma kọwapụtara, yana ntinye nke ngwaọrụ atụmatụ dị elu nke na-eji data dị ka ajụjụ weebụ, njem, na ihe mgbaàmà ndị ọzọ dị na mpụga iji ụgbọala. ihe eji eme ihe na ngwa ngwa. "
Ahụmahụ ịzụ ahịa
Nnyocha anyị na-egosi na ihe karịrị 85% nke ndị na-azụ ahịa na-eme atụmatụ ịbanye n'ụlọ ahịa maka akụkụ ụfọdụ nke njem ịzụ ahịa ha na ezumike a, mana ha na-enwe mmasị na ahụmahụ ahụ. Na mgbakwunye, gburugburu ụlọ ahịa ejirila BOPIS, Curbside, Covid protocol na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbagwojuru anya.
Ọ bụ ezie na emelarị ọtụtụ mkpebi, ndị ahịa ka nwere ohere ịwepụta nsonaazụ maka ihe fọdụrụ ~ 75% nke ire ezumike. Ịmelite algọridim dijitalụ, itinye mgbasa ozi ọdịnala, ịnya ndị ahịa aka na iguzosi ike n'ihe, hụ na ọrụ ụlọ ahịa zuru oke, na idobe ngwa ahịa dị n'usoro ga-enyere aka mee ka nsonaazụ dị elu na ala dị ike n'oge a. A na-enyere omume ndị dị otú ahụ aka site n'ịchịkwa anya nke ọma, nhazi nhazi, ike, na nyocha. N'iburu nchikota nke ọchịchọ siri ike nke ndị ahịa na ngwa ahịa zuru ebe niile na ihe ịma aka ndị ọrụ, ndị na-ere ahịa na-eme nke ọma ezumike a ga-enweta nnukwu ụgwọ ọrụ. Na mgbakwunye, ikike ndị na-ere ahịa na-ebuga n'oge ezumike a ga-ewulite ike nhazi, nke ha nwere ike itinye aka na 2022 na karịa.